Rant: Kalsoonida Sirta ah iyo Khibradda Isticmaalaha | Martech Zone
Talaado, Disembar 9, 2014 Tuesday, May 2, 2017 Douglas Karr
Waxaa laga yaabaa in go'aankii ugu fiicnaa ee aan sanadkaan ka gaaro wax soo saarkeyga iyo nabadgelyadeyda ay aheyd inaan isdiiwaangaliyo Dashlane. Kuma haayo dhammaan furayaasheyda sirta ah ee mobilka, desktop-ka iyo webka nidaamkooda aaminka ah, ee la duubay. Runtu waa, xitaa ma aqaano waxa furayaashaydu ay yihiin mar dambe tan iyo markii aan isticmaalo Dashlane Chrome Plugin si aad uga soo gasho shabakadda, Nooca Desktop ee barnaamijyada, iyo moobilka moobilka ee barnaamijka moobaylka.
Dashlane wuxuu leeyahay astaamo yar oo dheeri ah oo aan jeclahay. Marka hore, waxaan la wadaagi karaa furayaasha sirta ah isticmaaleyaasha idman - waxay u fiicantahay maareeyaha xafiiskeyga, xisaabiyaha, maareeyaha mashruuca, iyo horumariyeyaasha Waxaan siin karaa iyaga marin buuxa oo ay ku arkaan erayga sirta ah ama xaddidan xuquuqaha si fudud loogu isticmaali karo. Oo waxay bixiyaan xiriir degdeg ah oo aan dejin karo. Haddii, sabab kasta ha noqotee, aanan awoodin inaan qof ka siiyo oggolaansho liistada deg-degga ah - way dalban karaan gelitaan. Haddii aanan ka jawaabin waqti cayiman, waxay marin u helayaan kuwayga Dashlane xisaabta.
Maaddaama aan u adeegsanayo aaladaha, shabakadaha, iyo aaladaha - Waxaan jeclahay inaan haysto hal meel dhexe oo lagu keydiyo meel kasta oo laga soo galo iyo sidoo kale raad-raac hanti-dhawr Dashlane sidoo kale wuxuu ii sheegaa furayaasha sirta ah ee aan kakoobnayn oo khatar galinaya. Hadda waxaan hayaa furayaal sir ah oo gaar ah oo xoog leh oo ka duwan nidaam kasta oo aan galo. Markaa haddii qof helo mid ka mid ah eraygayga sirta ah, ma helayaan adeeg kasta. Oo hadday isku dayaan inay galaan Dashlane, waa inaan oggolaado qalab kasta oo cusub oo isku dayaya inuu soo galo.
Kaas oo ii keenaya dhibaatadayda lambarka sirta ah. Dashlane noloshayda waxay ka dhigtay mid fudud toban jeer laakiin codsiyada qaar ayaa noloshayda toban jeer ka sii adkeynaya. Waxaan aad uga xanuunsanahay inaan galo eray sir ah 2-dii ilbiriqsi ee kasta isla barnaamijkan. Cusbooneysii barnaamij… waa inaad soo gasho. Soo dejiso hees… waa inaad gashaa lambarkaaga sirta ah. Beddel goobaha maamulka… waa inaad gashaa lambarkaaga sirta ah. Tani inkastoo ay xaqiiqda tahay Waxaan horey u soo galay isla casharkii!
Ha weydiinin dadka inay sameyaan erey sir ah oo adag, oo aan hal shaashad lagu fahmi karin… ka dibna sii weydiiso inaad u soo gudbiso lambarka sirta ah ee tallaabo kasta oo ku xigta inta lagu jiro khibrada isticmaale! Nidaamyada sida Dashlane oo kale, mar dambe ma xasuusto furayaasheyda sirta ah, kaliya waan nuqul galaa oo waan dhajiyaa. Tani waxay ka dhigan tahay inaan ku soo galo Dashlane, nuqul ka furo erayga sirta ah, furitaanka barnaamijka, soo gudbiyo erayga sirta ah, ka dibna ku sii dhajiyo dalab kasta oo intaas ka dambeeya.
Waxaan jecelahay in barnaamijyada mobilada qaar ay u guurayaan nambarro 4-lambar ah ama isdabamarin taxaddar ah halkii ay iga dhigi lahaayeen in aan soo gudbiyo dhammaan 14-ka eray ee erayga leh koofiyado, nambarro, astaamo, iwm. si loogu xaqiijiyo barnaamijyada qaarkood (qof walba waa inuu tan helaa!).
Sii dadka haysta furaha sirta oo aad u ammaan badan ikhtiyaar ka fudud oo ay ku sii maraan barxadda. Waxba igama gelin dib u dhigida iyo u baahan markale erayga sirta ah, laakiin markaan ku jiro dalabka, gabi ahaanba waa wax lagu qoslo.
Shaacinta: Haddii aad iska qorto a Dashlane xisaabtayda Dashlane isku xirka kore, waxaan helayaa 6 bilood oo ka mid ah Dashlane qiimo jaban!
Tags: dashlanepasswordkhibrada isticmaalaha
Sida loo Cabiro ROI ee barnaamijyada moobilada